Apple inonyora maMac matatu neM1 pamwe neyakavanzika B2002 chishandiso | Ndinobva mac
Apple inonyora ese matatu maMac neM1s pamwe neyakavanzika B2002 chishandiso
Pakupera kwaGumiguru, Apple yakanyoresa chigadzirwa chisingazivikanwe muBluetooth SIG dhatabhesi pasi pezita rekuti "B2002" pasi pechikamu "Komputa yemunhu". Yaive nemuenzaniso nhamba "TBD" uye ikozvino kambani yakanyoreswa ese matatu aripo maMac ane M1 chip pasi peiyo imwechete yekupinda. Isu hatisati taziva kuti ichi chigadzirwa chitsva chii Uye nei ikozvino makomputa matatu ane M1 chip ajoina iyi runyorwa?
Chakavanzika nezvechigadzirwa chinonzi "B2002" chakanyoreswa kupera kwaGumiguru muBluetooth SIG dhatabhesi chinova chakanyanya kutonyanya. Iwo matatu maMac modhi ane iyo M1 chip ave zvino akaverengerwa saka rondedzero yemidziyo inogona kuve, yakaderedzwa zvakanyanya. Ramba uchifunga kuti isu takatonyoresa iyo iPhone 12, iyo Apple Watch Series 6 uye SE, iyo AirPods Max, iyo HomePod mini uye maPads matatu matsva, sarudzo dzacho dzakaganhurirwa.
Zvigadzirwa zvine runyerekupe rwekusunungurwa muna 2021 zvinosanganisira maAirTags trackers ayo akamirirwa kwenguva refu, itsva Apple TV, yechipiri-gen AirPods Pro, nezvimwe, asi hazvisi pachena izvo zvinomiririrwa ne 'TBD'. Apple dzimwe nguva inochengeterwa zvinhu zviri muBluetooth SIG dhatabhesi, senge H1 chip mune yechipiri chizvarwa AirPods uye W2 chip mune Apple Watch Series 3. Iyo "TBD" rondedzero ine "Mutyairi + Anobata + Mbiri Subsystem", saka inogona kureva iyo M1 chip kana chimwe chinhu chiri muM1 Mac uye haina kungovandudzwa kuratidza izvo zvakadaro, asi izvo zvinoramba zvichionekwa.
Tichafanirwa kumirira chitubu inova nguva inotarisirwa kuti michina mitsva inogona kutanga kuvhurwa kwegore rino 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inonyora ese matatu maMac neM1s pamwe neyakavanzika B2002 chishandiso
Lily Gladstone naLeonardo DiCaprio kutamba nyeredzi mufirimu yaMartin Scorsese yeApple TV +
Maitiro ekugadzirisa iyo Safari imba skrini pane macOS